Ahoana ny fisafidianana ny charger Wireless Wireless ho an'ny Android | Androidsis
Ahoana ny fomba hisafidianana charger tsy misy tariby ho an'ny telefaona Android
Eder Ferreño | | bateria, Tutorials
Nahazo fanatrehana amin'ny Android ny famandrihana tsy misy tariby. Vao haingana miresaka ny fomba fiasan'izy ireo izahay, ankoatry ny fanonona ny sasany amin'ireo finday avo lenta izay misy amin'izao fotoana izao izay mifanaraka aminy. Ho fanampin'izay, marika marobe hatrany no mihevitra ny hampiasa azy io amin'ny findainy, tahaka ny OnePlus. Noho izany, hitohy hampitombo ny fisiany eo amin'ny tsena amin'ny taona 2019.
Raha manana telefaona Androic izay manohana famandrihana tsy tariby ianao dia azonao atao izany mitady charger tsy misy tariby. Na dia maro aza ireo mpampiasa no tsy mahalala izay fomba tsara indrindra hisafidianana iray. Zava-dehibe ny hitazomana ao an-tsaina ny lafin-javatra sasany, izay resahina etsy ambany.
1 Carger tsy misy tariby
2 Safidio ny hery
3 Fametrahana toerana
Carger tsy misy tariby
Amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha efa niresaka taminao izahay momba ny charger tsy misy tariby izay azo ampiasaina amin'ny telefaona Android. Misy safidy maro, miaraka amin'ny vidiny lafo ary tsy isalasalana fa manara-dalàna izy ireo amin'ny lafiny fampandehanana. Ny vaovao tsara dia matetika ny charger tsy misy tariby dia manerantany. Ka tsy maninona izay safidinao, ho azonao ampiasaina amin'ny telefaoninao izany nefa tsy misy olana. Dia handeha tsara ary hamela anao hameno ny fitaovana.
Ny antony maha-universal azy ireo dia satria izy rehetra dia mampiasa ny famandrihana tsy misy tariby Qi. Io no fenitra ofisialy amin'io lafiny io ary ampiasain'ny mpanamboatra telefaona na mpanamboatra charger. Midika izany fa tsy tokony ho olana ny safidy, satria hifanaraka ny rehetra. Misy lafin-javatra fanampiny tokony horaisina, izay lazainay etsy ambany, izay mety manan-danja amin'ity safidy ity.
Safidio ny hery
Iray amin'ireo lafiny izay ny fahasamihafana amin'ny charger tsy misy tariby ho an'ny Android dia ny output output. Ity dia zavatra iray izay handika amin'ny hafainganam-pandehan'ny finday avo na ambany. Ny telefaona rehetra izao dia manohana ny famandrihana tsy misy tariby Qi amin'ny charger 5W sy 10W. Ka io no safidy azo antoka indrindra, izay hiasa amin'ny telefaona finday amin'ny fotoana rehetra.
Na dia misy telefaona vitsivitsy amin'ny Android aza manome safidy bebe kokoa. Misy ireo izay manohana hery lehibe kokoa, mamela ny finday ho voampanga amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa. Na dia tsy ny telefaona rehetra eny an-tsena aza no manana an'izany. Ny maodely sasany toa ny Galaxy S9 dia mahazaka charger hatramin'ny 15W.
Noho izany, miankina amin'ny smartphone anananao, mety misy safidy mahaliana anao kokoa. Satria mety misy mpampiasa mitady herinaratra lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra rehefa manefa ny telefaona finday, ka vita haingana araka izay tratra ny fiampangana. Amin'izao fomba izao, mila manamarina ny masontsivana amin'ny telefaonao ianao, hahalala ny hery zakany. Indrindra raha mieritreritra ny hividy charger 15W ianao. Tsy ny maodely rehetra amin'ny Android no afaka manohana azy.
Ity dia lafiny iray hafa tokony horaisina, izay ny safidin'ny mpampiasa tsirairay. Ireo charger tsy misy tariby izay ao aminay Android avelao ny finday ho voampanga amin'ny karazana toerana rehetra. Amin'ny sasany dia azonao atao ny mametraka ny telefaona mitsangana, ny hafa dia azo atao ny mametraka ny telefaona, amin'ny hafa ny fitaovana apetraka mitsivalana. Safidy maro no azo fidina amin'ity lafiny ity hampiasa an'ity karazana enta-mavesatra ity.
Ary koa ny endrika na ny endrik'ilay charger Zavatra tsy maintsy dinihin'ny mpampiasa maro izany. Azonao atao ny manana preferences amin'io heviny io, izay mifanentana indrindra amin'ny zavatra tadiavinao. Misy ireo izay mitady charger kely kokoa, ny sasany maniry iray manana endrika iray, hanampy ny telefaona ho eo amin'ny toerana iray. Safidio izay mifanaraka aminao indrindra.
Amin'izany fomba izany, afaka mahazo be dia be ianao amin'ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny findainao Android. Avelanay eto ambany ianao miaraka amina safidy roa misy amin'izao fotoana izao hampiasana an'io karazana fiampangana an-telefaona io. Ka afaka manana charger mifanentana amin'izay tadiavinao ianao.
Limxems 10W Wireless Charger amin'ny vidin'ny 13,99 euro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hisafidianana charger tsy misy tariby ho an'ny telefaona Android
Fleksy dia nohavaozina miaraka amin'ny fampidirana an'i Giphy ary fomba iray hanovana ny lahatsoratra voasoratra
Fangatahana fandoavam-bola amin'ny finday amin'ny Android misy any Espana